Labo Beelood oo ku dagaalamaya Gabalka Shabeele – Rasaasa News
Jijiga, June 4, 2014 – Dagaal u dhaxeeya labo beelood oo walaalo ah ayaa ka dhacaya tuulooyinka Baarguun, Jiid iyo Hadhaawe ee degmada Dhanaan, ee gabalka Shabeele.
Dagaalkan ayaa ku salaysan colaad ka dhalatay dhulka daaqsinta ah, ee ay wada degaan beela wada dhashay, laakiin degaanku u qaybsan yahay.
Gudoomiyaha beesha Tolomoge ee magaalada Johansburg ayaa cabasho u diray madaxwaynaha Ismaamulka Somalida, isaga oo ugu baaqay in ay joojiso colaada beelaha ka dhex jirta. Ku xigeenka Gudoomiyaha ayaa isna codsaday in colaada la joojiyo iyo degmooyinka la kala qaadanayo.
Warar madax banaan oo aan ka helay magaalada Godey, ayaa sheegay in dagaalkan ay ku lug leedahay dawlada degaanka Somalida iyo ciidamada gaarka ah Liyuu Booliska. Ciidamada Liyuu Booliska ayaan dhex dhaxaad ka ahayn colaada labada beelood.
Dhawaan ayey ahayd, kolkii ay dawlada degaanku lix  degmo sheegtay in ay leedahay beel ka mid beelaha dega gabalka Nogob. Arintaas oo abuurtay khilaaf, in kasta oo ay beeluhu hoos u xaliyeen khilaafka uu maamulku abuuriyay.
Dawlada Atoobiya iyo maamulka degaanka ayaa waligooba khilaaf iyo dagaalo ka dhex abuura beelaha Somalida ee dega dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dawlada Atoobiya iyo maamulka degaanka ayaa beelaha iyo dadka shacabka soo kala dhawaysta, iyada oo fogaynta iyo soo dhawanteeda ku salaysan yihiin dadka ku jira gobonimo doonka ONLF.